एकपल्ट रोकिएपछि काम नहुने र आयोजनाको समयावधी लम्बिदै गएपछि मान्छेको विश्वास हराउँदै जाने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘व्यवधान हुनु भएन, विकास निर्माणको काम रोकियो भने बहुआयामकि क्षति पुर्‍याउँछ’ उनले भने । onlinekhabar बाट
२०७७ चैत्र २१, शनिबार १०:३३ 1 Minute 193 Views
निर्माणाधीन बुद्धपार्कको बुद्धमूर्ति तोडफोड !
सेलिब्रेटी कम्युनिस्ट सांसदको घाँटीमा १ किलो सुन !
बिप्लव माओवादीको चन्दा आतंक ५० लाख नदिए ठूलो ख,त,रा,,भिम बहादुर मृत्युको बास्तबिकता (भिडियो हेर्नुस)